1. Chii chinonzi YK-11?
2. YK-11 inoshanda sei?
3. Kuenzanisa YK-11 kuTesttosterone
4. Ndezvipi zvingatarisirwa kubva kuYK-11?
5. YK-11 Njodzi pakashandiswa
6. Zvakanaka sei kuvaka muviri?
7. Ndiani angashandisa YK-11?
8. Iyo yakanakisisa YK-11 dhigiri
9. YK-11 hafu yeupenyu
10. Chii chinonzi YK-11 kuumbwa kwemuviri kwakafanana?
11. YK-11 migumisiro
12. YK-11 maongororwo nevashandi chaivo
13. YK-11 isati yasvika uye shure kwekushandiswa
1. Chii YK-11?
YK-11 inotsanangurwa pasi pe (SARMs) Selective Androgen Receptor Modulators. Yuichito Kanno, musayendisiti, akawana SARM YK-11 mu 2011. Achishandisa tsvakurudzo yake, akasimbisa kuti chimiro ichi ndecheSARM. YK-11 (431579-34-9) makemikari akafanana akafanana nea steroid. Migumisiro yaro yakafanana neyeimwe steroid asi asi ine madambudziko akaipa. Zvisinei, izvi hazvirevi kuti YK-11 is steroid. Pasina chero chinokonzerwa neprostate, chigadzirwa ichi chinogona kukonzera bvudzi kukura mumuviri. Zvakawanda zvechigadzirwa ichi zvinogona kukonzera utsinye saka kungogadzirisa doses kunofanira kutorwa. Iko inorgen androgen uye naizvozvo inopa mukana wakafanana nezvimwe uyerogen receptors.YK-11 inosunga kumubati we androgen inoshandiswa mumapfupa nemasumbu matukisi. Izvi zvinoguma mukuvakwa kwekukurumidza kwemaonda masimba. SARM YK-11 vashandisi havana kumbova nemigumisiro yakaipa nekuda kwekukwanisa kwekombani kusarudza.
Maererano nekutsvakurudza, YK-11, pane imwe nzvimbo inonzi myostatin inhibitor sezvo inogona kuderedza myostatin mabasa. Myostatin ipurotini inogadzirwa uye yakabudiswa nemuviri. Mune zvakawanda, mapurotini aya anonzi ma myokines. Masero emasumbu anosunungura mapuroteni aya nechinangwa chekudzivirira kusagadzikana kwemasumbu kukura. Kazhinji, dzinosunungurwa panguva yekusimudza masero mushure mekuputika kwemasero emasero. YK-11, kuva myostatin inhibitor, inoderedza huwandu hwemyostatin inotenderera mumutumbi ichibvumira musikana kuvaka nhengo dzisina simba dzemaviri panguva dzemaitiro.
Pakati peSARM dzakawanda dziripo, YK-11 ndiyo imwe yezvinhu zvakanakisisa kunze uko. Kuenzanisa YK nedzimwe SARM dzakadai seLGD-4033, zvingangove zviri pamusoro pezita. Kunyangwe, tsvakurudzo shoma dzakaitwa kuitira kutsigira iyo YK-11 ndiyo yakasimba. Nokuda kwechikonzero ichi, kunyanya kushandiswa kwevanoshandisa vanosarudza kushandisa SARM dzakadai saRAD-140, GW-501516 kana Ostamuscle.
2. Sei YK-11 basa?
SARM YK-11 anosunga kumubati we androgen mumuviri. Ichi chiito chinovandudza mazinga eanabolic zvinokonzerwa nemasero emasisita, izvo zvinozoita kuti kuve nekudzikisa kwemuviri wemutonda. Kuenzanisa nedzimwe SARM dzine maitiro echero androgenic, zviitiko zveYK-11 zvinonakidza. Kuongorora kwesayenzi kwakagumisa kuti YK-11 (431579-34-9) inoshanda pamasero emasisipo akakwirira zvikuru. Zvigumisiro zvakaratidza kuti mamwe ma-anabolic makemikari akabudiswa nemasero emasumbu apo 500nmol yeYK-11 yakapiwa kana ichienzaniswa kana testosterone yaitungamirirwa.
Izvo zvakakodzera kugumisa kuti YK-11 yakagadzirirwa kukurudzira musimba kukura semamwe maSARM kunze uko. YK-11 mabasa zvakanakisisa kusimudzira masero matsva kukura, musimba kukura, uye musimba kuchengetedza. Vashandi vemuzvikamu izvi vanogona kufara izvi zvose zvisingabatsiri kutarisana nemigumisiro yakaoma inokonzerwa nedzimwe steroid mumusika. Ichi ndicho chikonzero chikonzero nei YK-11 mukurumbira iri kukura pakati pevarimi vemiti. Vazhinji vashandisi vanosarudza chidimbu chinoratidza simba rakanaka pamatumbu asi asiri kusvika kune zero migumisiro.
YK-11 inoshanda zvakakwana kune vanhu vanofunga kuvaka maonda masimba. Uyewo, zvakakosha kumugadziri wemuviri anofarira kuchengetedza ikozvino kuvaka masumbu mushure mekugadzirisa uye kuderedza hutano hwemitsipa iyi nekuchengetedza mafuta masero mukutarisa. Sarm RAD140 (Testolone) User akaudza: Ongororo, Shandisa matanho, Njodzi
Testosterone ndeimwe yemakemoni anokosha anobudiswa uye anoshandiswa mumutumbi. Inotamba mabasa maviri anokosha; se steroid anabolic uye sehomoni yepabonde. Testosterone yakajeka inowanikwa mumuviri, kuburikidza nejisi, pose paine utachiona husina kunaka hwetsika. Vanhu vanoda kuwedzera hutano, simba romuviri rakasimbiswa uye kusimba kwemisumbu kukura kushandisa testosterone sezvo ine zvimwe zvakafanana kune ye steroid.
Testosterone uye SARM YK-11 zvakafanana maererano nebasa uye sangano. Chinokosha chakasiyana chete ndechekuti testosterone inosvika kune masero akawanda emutumbi apo YK-11 inosarudza pamasero ayo anoshanda. High testosterone maitiro mumutumbi wemumuviri ane ngozi uye anogona kuuya nehutano husingadikanwi hwakafanana nehupfeko kukura. Saka vashandi havafaniri kutora testosterone kwenguva yakareba. Izvo zvinobatsira iyo hormone inogona kugovera hazvina kuenzanisa nekukuvadza kwakakonzerwa kana inoshandiswa yakawanda.
Miseve nemapikisi muropa zvinowanikwa chero nguva apo testosterone inobatwa mumuviri, kuburikidza nejisi. YK-11 migumisiro yakasiyana. Iyo inoshanda pane zvimwe zvipembenene saka kushanduka pamwe nemigumisiro inenge isina basa. Saizvozvowo, YK-11 inoshandiswa mumuromo kana yakaita saizvozvo yakachengeteka uye yakakodzera kana ichienzaniswa nekupinza testosterone.
Research and YK-11 mhinduro vakaratidza kuti maSARM akachengeteka pakushandiswa kana achienzaniswa ne testosterone. Zvisinei, izvi hazvifaniri kureva kuti vashandisi havafaniri kuve vakakwana pavanotarisira YK-11 dhigiri. Mirayiridzo uye kuwedzerwa kunoridzirwa zvakawanda zvinofanira kuteverwa zvakasimba. Kuwedzerwa kwepamusoro kweiyo SARM kunogona kukonzera kukuvadza kwechiropa uye kuderedza zviduku zvinokonzera zvinotevera kushandiswa kwayo. Bodybuilders vanogona, asi, vashandise iyo kwenguva yakati yakatarwa yekuita kuti misi miviri isimbe ichivakwe.
Kupikisa testosterone kunouya nemigumisiro yakaita seyemagazi eropa, matambudziko ekurara, acne kana kunyange kurohwa. YK-11 migumisiro inokosha; vamwe vashandisi havaoni chero. Nokudaro, YK-11 ibasa rinokurudzira-rinokurudzira rinokurumidza kukura musimba, mabhoti simba uye zvinoshamisa zvinopa muviri wakanaka.
YK-11 zvinobatsira yakazara zvikuru kana yakawanda yehuwandu inoshandiswa. Uyezve, izvi zvikomborero hazvifambidzwi nemigumisiro yakaipa sezvinoitika apo uchishandisa mamwe steroid. Zvikomborero zvinosanganisira;
Kuwedzera musimba simba
YK-11 yakanga isati yamboonekwa kare kare, asi zvakanaka pakusimbisa misungo yomushandi. Mushumo weKannno wakaratidza kuti masero emasisipo akazarura kuYK- 11 yepamusoro maitiro anebolic yakaenzana nekuenzaniswa nemasero emasumbu akaiswa kuDHT. Ongororo dzakawanda dzakaratidza kuti chimiro ichi chakakwana kusimbisa masisita akanaka kune vavatambi uye mizimba. Inoita izvi kuburikidza nekuderedza masero emasisita uye kuvamutsa kuti vabereke zvakawanda zve follistatin.
YK-11 inosarudza pamasero ayo anoshanda pane izvozvi inoita mabasa ayo muenzaniso. Iyo inongogadzirisa mabasa eanabolic emasero emasimba kuti atange kukura kwemasimba pasina kukonzera chero yesrogenic YK-11 migumisiro. Semaglutide Migumisiro Sega Peptide? Kwete, Zvakawanda Kupfuura Izvi!
Uyewo, SARM YK- 11 haishanduri chimiro nekushanda kwemamwe majini edzimba. Hazvivhiringidzi ne-androgen receptors iri mumasangano, prostate, mapfupa nedzimwe nhengo dzomuviri. Vashandi vanonakidzwa nemhando yese yekuvaka musimba vasina kutarisana nemigumisiro inowanikwa nekutora steroid inofanirwa.
Zvimwe zvipo zvinosanganisira;
Kukurumidza kupisa kwemafuta
Kugadziriswa kwemishure mushure mokunge uchinje
Kuvandudza kasi uye simba
Kuwedzera kwebasa uye libido
Chinonyanya kukosha, zvakanaka kutora kuti mizinga inotarisa YK-11 ngozi mazinga. Kuwedzerwa kuyerwa kwemaji kuchawedzerawo mikana yekuwana migumisiro yechirwere. Kuva SARM yakasimba, kune mikana yokuti vashandi vanogona kunzwa zvimwe zvisingabatsiri migumisiro. Zvinosanganisira;
Izvi zvinogona kunge zvisina kunaka kana kuti zvakanaka. Vashandi vanoda kuwedzera kukura kwebvudzi havangave nechinetso nehupenyu hweYK- 11. Zvisinei, avo vasingadi kubwinya kwebvudzi rinokurumidza kukurumidza kubvisa bvudzi sezvo vachifarira musimba kukura. Uyewo, mamwe steroid anoita kuti bvudzi rirasikirwe kana rakatorwa kwenguva refu. Vashandi vanogona, saka, vanoshandisa YK- 11 kugadzirisa chinetso chekushaya misoro.
Migumisiro ye prostate
YK -11 haibvumiri uyerogenic zvinokonzerwa naizvozvo haibatsiri prostate. Mamwe steroid anozivikanwa kuwedzerwa prostate ukuru, asi iyi haisi iyo yeYK- 11. Saka varume vanogona kuishandisa pasina kushungurudzika kwekuwedzera kwe prostate uye zvinetso zvinotevera.
Kusvika ikozvino, hapana nyaya inonzi yakanyorwa yeYK-11. Vashandi vanogona kunyarara kudzivisa kushandiswa kwechirwere ichi zvishoma kana pasina zero migumisiro.
Vashandi vanofanira kungoshandisa zviyero zvinorayirwa uye vadzivise kushandiswa zvisina kunaka kwechirwere ichi pamatambudziko ose. Kufunga kuva, mirefu kwenguva yakareba migumisiro yepamusoro dhiyo yeYK-11 isati yawanikwa.
Dzimwe mimwe migumisiro inosanganisira;
Kunyange hutsinye husingaiti muviri, hunofanira kudzorwa. Vashandi vanotarisana nemigumisiro iyi vanofanira kuderedza masero avo. Vaya vanotora mhosho yakakwana havagoni kuwana dambudziko iri.
Izvi zvinowanzoitika pakati pevashandi ve testosterone. Hakuna kuwedzera kwakakura kwemazamu akaenzana akaonekwa pakati pevashandi veYK-11; zvose musikana nemurume. Zvisinei, vamwe vanhu vakataura shanduko shomanana uye kudengenyeka kwezamu mushure mekushandisa chigadzirwa ichi kwenguva yakareba.
Kana vashandisi vakatarisana nezvinokanganisa YK- 11 migumisiro, vanofanirwa kusiya kushandiswa kwechikamu ichi pakarepo. Uyewo, vanofanira kushanyira chiremba kuti awedzere kuongorora uye kurapwa.
Iyi SARM yakasikwa kunyanya kusimbisa musimba kukura. YK- 11 inoshanda nenzira dzakasiyana-siyana yekukurudzira kuvaka nekuchengetedza kwemisungo yakaonda. Inobatsirawo mukupisa mafuta uye kuderedza mafuta akaoma akaoma akachengetwa mumuviri.
Kana ichitenderera masero masero, YK-11 inowedzera musimba kukura. Uyezve, inosimbisa misi miviri yakaonda. Sezvakakurukurwa pekutanga, iyi SARM inosarudza uye inoshanda pamasero chaiwo saka inopa migumisiro iri nani munguva pfupi yekushandiswa.
Vamwe vanhu vane genetic-make-up iyo haitsigire kuvakwa kwematumbo. YK-11 (431579-34-9) inobatsira vanhu vakadaro nenzira inofadza. Izvi zvinoita sezvo YK- 11 iri myostatin inhibitor. Vamwe vanhu vane huwandu hwakanyanya hwemyostatin, puroteni inodzivirira musimba kukura, mumitumbi yavo. Vanhu vakadaro havasi kuvaka masumbuko kunyange nekubatsirwa nemishonga inoshandiswa-inowedzera. Nenguva isipi, YK-11 inobatsira kuderedza mazinga e-myostatin mumuviri zvichiita kuti kuderedzwa kwekuvakwa kwemafupa akaonda.
Ani naani anoda kuwedzera misumbu anogona kushandisa chidimbu ichi. Kunyange zvazvo KY 11 inofungidzirwa seSARM yakachengeteka, vanhu vane mamiriro ezvinhu ehutano husinganzwisisi vanorayirwa kuti vashandise mushure mekunge chiremba achivapa kuenda-mberi. Mumwe muongorori wehutano anoziva kuti YK-11 inoshanda sei nemigumisiro inogona kuva nayo pamishonga inoshandiswa kugadzirisa chirwere chepreexisting.
YK-11 haiti kukurudzira testosterone kumatambudziko asina kunaka. Muchiitiko ichi, vakadzi vanogona kutora chikamu ichi vasingatyi virilization nezvimwe zvinetso zvakashata. Zvisinei, vakadzi vanofanira kutora pasi YK-11 muyero kupfuura vanhu.
Muiti wekugadzirisa uyo aive achitarisira SARM yakasiyana anogona kushandura kuYK-11 nokuda kwezvikonzero zvakajeka. Chokutanga, zvakakosha, uye zvinogadzirisa zvinonzwika munguva pfupi. Chechipiri, kushandiswa kwayo hakuzoteverwi nemagumisiro emagumisiro. YK-11 inopa musikana wakachengeteka unovaka gadziriro yevanhu vose. Nhamba imwe chete yeYK-11 inopa mhinduro dzakanaka nokukurumidza kana ichienzaniswa nedzimwe maSARM (kunyanya kana kwete ose) somuenzaniso Ostarine uye Lgd 4033.
Nokuda kwemigumisiro yakakwirira, vashandisi vanofanira kuita zvekudzidzira nguva dzose uye varambe vachiita basa rose. Migumisiro yechikamu ichi inogona kusiyanisa kubva kune mumwe munhu kune imwe sezvo miviri yakasiyana. Migumisiro yacho, zvisinei, inonyatsojekesa kana munhu anoshandisa maitiro anorayirwa paanenge achiri kushanda zvakare kuti kuderedza kukura kwezvakasikwa uye kukura kwemasimba.
8. The optimal YK-11 muyero
Zvakaoma kutaura zvakakosha zvakakwana YK-11 dosage. Vazhinji vashandisi vanotaura dhigi pakati pe5mg kusvika 10mg pazuva. 15 mg muyero kana zvimwe zvakanyanya hazvikurudzirwi, zvichifunga kuti yakakwirira mizinga yakakwirira mikana yekutarisana nemigumisiro. Chero zvazvingava, migumisiro yainzwa pakushandisa mukana we 10mg ichafanana neavo vainzwa pavanoshandisa chirongwa che 15mg.
Dzimwe nguva, vamwe vashandisi vanotaura kuti vakashandisa yakakwirira YK-11 doses pasina kubata nemigumisiro. Izvi zvinogona kuitika sezvo, sezvakambotaurwa, miviri yedu yakasiyana. Vamwe vashandisi vanoshandisa YK-11 pamwe chete nemamwe SARM uye nemigumisiro yakanaka yakanyoreswa. Zvisinei, pfungwa iyi inogona kusashanda kuvanhu vazhinji naizvozvo havakwanisi.
YK-11 maongororwo nevashandisi ave achishandiswa kugadzirisa maitiro akakodzera. Vanhu vanogona kuunganidza humwe ruzivo kubva kunezviongororwo kana kuziva kuti chii chinovabatsira ivo kuburikidza nekuedza. Nootropic Source Bromantane: Reviews, Effects, Dosage
Chero chero cheji YK-11 pasi pe5mg pazuva haichazobatsiri chero mhinduro. 10mg dheji zuva rega rega inokurudzira muscle buildup munguva pfupi. Kuti udzivise njodzi, vanotanga kushandisa mazamu maduku kuti vaone kuti miviri yavo inopindura sei uye zvichida kuwedzerwa kuyerwa kwemaawa nenguva zvichienderana nekuona kwavo.
9. YK-11 hafu upenyu
Pane zvishoma zvesayenzi mashoko anowanikwa pamusoro YK-11 hafu-upenyu. Maererano nehuwandu hwehupenyu hwehupenyu hwehutachiona, hafu yehupenyu huri pfupi. Izvi zvinoreva kuti inofanira kutorwa kazhinji pazuva kuti zvive nani.
Nhamba yakawanda yeYK-11 inovimbisa kuti mazinga echikamu ichi anoramba akasimba mumuviri wemuviri. Izvi zvinoguma mukuzadzisa migumisiro mukati meYK-11 purogiramu. Semuenzaniso, kana muumbi wezvirongwa paanotarisira 10mg dhisi zuva nezuva, anofanirwa kutungamirira 5mg mangwanani emangwanani uye 5mg yasara manheru.
10. Chii a YK-11 Kuvaka muviri kunoratidzika sei?
Pasi pane mienzaniso inowanikwa YK-11 maitiro;
5mg zuva rega rega kwemavhiki matanhatu anotevera
10mg- 15mg zuva rega revhiki masere
Vashandi vari vatsva kuYK-11 vanowanzoshandisa maitiro ekutanga. Izvo zvinokwanisika kuwana vashandi vanoshandisa dhigirisi yakareba mumutambo wekutanga. Izvi hazvibvumirwi.
Vashandisi vane ruzivo vachaenda kwechipiri YK-11 purogiramu. Iyo yakareba yakakura yakareba uye yakareba miyero inoshandiswa.
YK-11 stack haina kunyatsorumbidzwa. Vashandi havafanire kushandisa chidimbu ichi pamwe chete nemamwe makemikari.
11. YK-11 zvawanikwa
SARM YK-11 migumisiro yakanaka. Izvo vanabolic zvinokonzerwa nemapfupa nemasumbu matukisi zvinoshamisa. Kubva pakucherechedza kunofadza kwekutanga uye shure kwekuonekwa kweSARM user's, zviri nyore kuona kuti YK-11 inopa migumisiro yakanaka pane mamwe maSARM. Izvi ndezvokuti YK-11 (431579-34-9) ndiyo SARM yakanakisisa inowanikwa mumusika.
Kuwana 10lbs yemasumbu zvakasikwa haisi basa rakaoma. Zvisinei, vashandi vanogona kuwana zvishoma 10lbs zvakashata musimba paYK-11 muyero. Vashandi vauyawo kuti simba rekupenga rinowanikwa paYK-11. Izvo simba rakawedzerwa rakaguma rinokonzera mamwe musero fiber nemhaka yehuwandu hwemusoro hwakasimudzwa. Izvo zvishoma nezvirongwa zve 5mg zuva rega rega, vashandisi vanoti vanoona kuchinja kukuru.
Kudya kwakanaka uye nguva dzose yekurovedza muviri zvinosarudzawo YK-11 migumisiro. Zvinokurudzirwa kudya kudya kwakanaka uye kushanda kakawanda kunyange usati watanga YK-11 purogiramu.
12. YK-11 kuongororwa nevanhu vechokwadi
"Ndaishandisa 5mg zuva reYK-11 muyero mumavhiki angu matanhatu ekutanga. Ndakashandisa nhamba yepamusoro kuti ndione kuti izvi zvinogadzirisa sei muviri wangu. Nenguva isipi, zvinhu zvose zvakafamba zvakanaka, uye mhinduro dzaive dzakashamisa. Pakave vhiki yechina, ndakanga ndatova nematomu akawanda uye ndakarashika mamwe mafuta omuviri zvakare. Ndakanga ndine shungu pakudya kwangu uye ndakasarudza imwe nechekare makori. Ndakanga ndichinyanya kushingaira uye pane dzimwe nguva ndakabatanidzwa mumutambo wemwoyo. YK-11 ndiyo SARM yangu itsva yakanakisisa; kunyangwe handifaniri kutarisana nemagumisiro iwayo anoshungurudza wandakabata nawo ndisati ndatowana iyi ikamu yakasiyana. "
"Ndakagamuchira 5.2 pounds yemasisita uye ndakarashika 3% mafuta mumuviri mushure mebhasikoro YK-11 kwevhiki matanhatu. Uyewo, ndakawana simba rakawanda uye ndakakwanisa kuwedzera zvakanyanya. Zvechokwadi, YK-11 ndiyo yakanakisisa SARM mumusika. Ndakatenga chigadzirwa ichi kubva kuFcooker.com chaizvoizvo; iyo purozi yaiva zvinhu zvose zvandainge ndakumbira. Dai chete ndaive ndakashanda uye ndakatarisa pane zvandaidya, ndingadai ndakave nemigumisiro yakasimba uye mhinduro dzakanaka. Kazhinji, zvigumisiro pamagumo emhepo zvakagutsa. Ndinosarudza kuramba ndichirishandisa muhupenyu hwangu hwose SARMs kuvaka muviri cycles. Vanhu vanogadzira muviri vanofanira kutenga SARM YK-11 kubva Phcooker.com; ivo vakavimbika. "
13. YK-11 kare uye shure kwekushandiswa
Izvi izvi zvisati zvaitika uye pashure pezvifananidzo zviri kuratidzwa pamusoro apa zvinoshamisa. Zvinonyatsoratidza kuti YK-11 yakasimba sei. Mufananidzo uri kuruboshwe wakatorwa munhu wacho asati aonekwa kuYK-11 dhigiri. Mufananidzo wechipiri wakatorwa mavhiki mana shure SARM YK-11 Cycle.
Zvinonyatsojeka kuti mushandisi akaisa huwandu hwakawanda hwehutachiona humukati munguva pfupi. Uyu mufananidzo wekufambira mberi unopa pfungwa yezvinhu zvinogadzirisa muviri zvinogona kutarisira kubva pakupa YK-11. Zvakakoshawo kucherechedza kuti murume uyu, sezviri pachena, achicherechedza kudya kwakanaka uye akadzidziswa nguva dzose. Izvi zvinowedzera YK-11 migumisiro kuti ipe migumisiro iri nani.
14. Kwokutenga SARM YK-11 (YK-11 zviri kutengeswa)
YK-11 inotengeswa muma pharmacy uye zvivako zvehutano munyika dzakawanda. Vashandi vanogona kutenga nyore kubva kune idzi dzekutengesa kana vanogonawo kusarudza kuita mairairo paIndaneti. Zvisinei, vatengi vanofanira kunyanya kuchenjerera pavanenge vachitenga; zvinonzwisisika kuita shanduko yekuongorora yemutengesi kuratidza kuvimbika kwavo. Iyi ndiyo nzira chete yauchazovimbiswa nayo nemiti yakarurama inopiwa muraji yakakodzera. Zvigadzirwa zvepamberi zvine zvimwe zvinogadzirwa zvinowanikwawo mumusika. Muzviitiko izvi, vashandisi vanofanira kuve nechokwadi chokuti vanotenga SARM YK-11 yepakutanga.
Kwete yose "YK-11 inotengeswa"Post online ndeyechokwadi. Vashandi vanofanira kutarisa kuongororwa kwevatengi pamutengesi uye chigadzirwa chinopiwa musati maita chero mirairo. Sezvo YK-11 inotorwa zuva rega rega, kuchenjera kuve nechokwadi kuti iwe unotenga chidimbu chichapa mhinduro inoda uye yakachengeteka kushandiswa. Bodybuilders vanogonawo kuenzanisa nemitengo uye zvichida kuenda kune imwe purogiramu inodhura. Zvisinei, dzimwe nguva inodhura inodhura.
Pamusana pemakakatanwa akawanda pamusoro pehutano uye kuvimbika kwepepa uye chigadzirwa chinopiwa, vatengi vanogona kutenga SARM YK-11 online kubva kuFcooker.com. Tinopa maSARM ekutanga uye akakwirira pamutengo wakanakisisa.
Sezvakaitika pane zvataurwa pamusoro apa, zviri pachena kuti YK-11 inotarisana nepamusoro pezita reSARM rakanyatsoshanda. Kutsvakurudza uye kuongorora kweYK-11 zvakaratidza kuti inoderedza kukura uye kukura kwemaonda masimba munguva pfupi. Uyewo, icho chinhu chakachengeteka chinogona kutarisirwa nevanhu vose vane utano. YK-11 inosarudza saizvozvo inokanganisa masero chaiwo. Kushandiswa kwaro hakurevi nemigumisiro yakaipa.
Vashandi vasinganyatsoziva kana chigadzirwa ichi chiri chakanaka kwavari vanofanira kubvunzurudza mudzidzisi kana chiremba vasati vatora chero dhigiriji. YK-11 Wongororo inowanikwa paIndaneti inogona kunge yakabatsirana zvikuru kumarudzi matsva. Vachaunganidza mamwe mashoko pamusoro pechigadzirwa uye zvigumisiro zvinotarisirwa.
Vanhu vari pane mamwe madhigiriro vanofanira kupiwa mazano pamusoro pekuti vashandise chidimbu kana kwete nechiremba. Kuti udzivise njodzi, vanhu havafanire kutora chikwata cheYK-11 uye panzvimbo iyo vanoshandisa icho chete. Kana zviitiko zvakakomba zvikaitika, mushandisi anofanira kumira pakarepo YK-11 muyero.
Mudiwa ndinoda kuziva mutengo wehuwandu hushoma hwe IGF1 DES, HGH191AA, MK2866 uye YK-11. yakanakira regeads, okamoto
Zvakanaka, tichaonana newe neemail.